BlDC mota mutengo 12V 24V Brushless DC mota Yekumhanyisa Kudzora Systems
BLDC mota mutengo 12V 24V yekutengesa
Brushless DC Motors | Mitengo Yakadzika, Hwakakwira Hunhu
12V 24V 36V 48V Brushless DC (BLDC) Motors Gadzira nehunyanzvi hwazvino hunyanzvi & zvigadzirwa '
Tine makore mazhinji eruzivo mukugadzira mota, uye zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzakawanda nyika dzekunze. Isu takagadziridza uye takavimbika vatengi, chete kugadzira yakanaka mota kwauri. A brushless DC yemagetsi mota (BLDC mota kana BL mota), inozivikanwawo semagetsi commutated mota.Buy mutengo wakaderera, yakakwira mhando brushless dc mota KUTI ISA NAYE ~ ~
Bldc mota Mutengo, Wholesale & Suppliers
Brushless DC motors inoratidza yakadzora mashandisirwo esimba, hupenyu hwakareba, ruzha rwakaderera, compact saizi uye huremu hunhu hunhu.The STSPIN32F0 iSystem-In-Package inopa mhinduro yakabatana yakakodzera yekutyaira matatu-chikamu BLDC motors uchishandisa nzira dzakasiyana dzekutyaira.China 72V 10kw Magetsi Dhudhudhudhudhu BLDC Motor. Iyo DRV10983 chishandiso mutatu-chikamu sensorless mota mutyairi ane simba rakabatanidzwa MOSFETs. 1 hp (750W) BLDC mota ine 80 mm square flange saizi, inoshanda pa 24V / 48/72 / 96V voltage uye yakaderera ruzha chizvarwa.
Kambani yedu inopa BLDC mota, Brushless DC mota, dc brushless mota, dc uye BLDC mota madhiraivha neazvino tekinoroji & zvishandiso pamitengo inodhura.
Chero rudzi rwe 24v bldc mota, 5kw bldc mota, 1500w bldc mota, 2000w bldc mota, 3kw bldc mota, tsvaga mutengo wavo kubva kuChina kambani yakanakisa uye isu tichakupa iwese wakanyanya kuita uye mutengo wakaderera.
Yakakwirira Simba kubva ku200W kusvika ku 20KW, 1500/3000 RPM, General Chinangwa neDhivhaer uye yevhoriyamu kubva 24V kusvika 120V, kubva kumotokari kuenda kumaindasitiri. Nyore, compact, uye yakaderera mutengo.
Isu tinopa mutengo wakadzika, brushless dc mota yakakwira torque yakaderera
Series BlDC yakakwira torque yakakwira Mutengo-zvinobudirira shanduko kuenda kuBrushless DC Motors, inoshandiswa kweMagetsi Motokari Uye Nesimba Duty Industrial Chikumbiro, vatengi zvemagetsi, zvekufambisa. inowedzera encoder kana yechokwadi encoder yakasungirirwa, Brushless DC Motors mabhureki ane yakaderera voltage dhizaini yekushandisa. Isimba rakaringana kuvhura kana kuvhara mapofu, kana kumwe kusevha application.
Isu tinopa mhando yepamusoro, zvigadzirwa zvemutengo wakaderera. Makore ekugadzira mota ruzivo ndeye kungokupa iwe mhando yepamusoro uye yakasimba mota. Chii chinonzi Brushless DC mota (BLDC) uye Maitiro Ekuzvidzora neArduino. Iyo STSPIN32F0 iSystem-In-Package inopa mhinduro yakasanganiswa yakakodzera yekutyaira matatu-chikamu BLDC motors vachishandisa nzira dzakasiyana dzekutyaira. Kana iwe uine chero mibvunzo iwe unogona zvakare kutibata nesu, isu tichava vanofara kukubatsira iwe!